Bafuna ikhansela lixolise ekade beboshiwe | News24
LAST UPDATED: 2019-10-20, 08:15
Bafuna ikhansela lixolise ekade beboshiwe
isithombe: sithunyelweIlabo ekade beboshelwe ukubopha uzungu lokubulala ikhansela.
ABESILISA kanye nowesifazane oyedwa akade beboshelwe ukubopha itulo lokuzama ukubulala ikhansel laka-ward 17 uMnu Thamsanaqa Sithole bathi bahlukumezekile kanti futhi bafuna ikhansela lixolise ngokubahlambalaza nokungcolisa amagama abo.
UMnu Sipho Mphilisi Ndlovu, Thabani Ngubane, Victor Ndlela, Mfaniseni Hadebe Fethi Mthembu noNks. Philisiwe Shezi baboshwa ngezintathakusa mhla zingama-23 kuMasinagana (January).
Bavela enkantolo kaMantshi yase Mgungundlovu mhla zingama-25 kuMasingana (January) nokuyilapho icala labo lafike lahoxiswa khona ngenxa yobufakazi okuthiwa abuhlangani.
Bonke laba akade bebeshiwe bathi basahlukumezekile kanti futhi nemindeni yabo nayo ihlukumezekile.
Bekhuluma ne-Echo ngoMsombuluko mhla zi-4 kuNhlolanja (Februaruy) bathe bazimisele ukuthathela umbuso izinyathelo zomthetho kanti futhi bafuna nalo ikhansela lixolise emphakathini lisho ukuthi kungani libabophisele into abangayazi .
UMnu Sipho Ndlovu uthe ngisho abantu basemphakathi abaphila kuwona sebebabuka ngenye indlela kanti ayisapheli ngisho ingxoxo nomuntu bengabuzwanga ukuthi kungani babefuna ukubulala ikhansela.
“Ibuhlungu lento ngoba nigcina senixabana nomuntu uloku uzama ukumchazela ukuthi awuzange wenze lutho kanti futhi necala nalo lahoxiswa. Sihlukumezekile ngoba asazi ukuthi samenzani ukhansela ngoba ngaphambi kokuba siboshwe sasikhuluma kahle naye kungekho lutho olubi.Mina nje ngoMsombuluko mhla zingama-21 kuMasingama wangifonela ukhansela wathi ucela sihlangane ngabe sengibamatasa ngangakwazi sekudlula usuku sengiyaboshwa kuthiwa ngangizama ukumbulala kanjani? Into esixakayo futhi ukuthi kungani siboshwa manje ngento ekuthiwa sasifuna ukuyenza phakathi kwezi-2016 no-2017,” kubeka yena.
UMnu Ndlela uthe yena ngisho izingane zakhe ekhaya zisathukile kanti futhi indodakazi yakhe eneminyaka engama-22 ichithe isikhathi esingangesonto ilele esibhedlela ngenxa yalesi sigameko .
“Ingane yami isiphila ngokugadwa ngoba ihleli ithuka isaba ngoba yayikhona ibuka ngesikhathi ngiboshwa ngokhonjwa nangezibhamu engathi ngiyisigebengu,” kubeka yena.
UMnu Ngubane uthe : “Umfana wami ofunda enyuvesi bafika bamukhomba ngesibhamu bathi akangikhiphe ngilaphi kanti namanje naye uyethuka. Kusanda kuhamba ugesi nje ekhaya wagxuma ememeza ebuza ukuthi ngabe wonke umuntu usaphila yini akukho okubi okwenzekile.
“Ngizothatha izinyathelo zomthetho ngoba ngeke nje ngiboshelwe into engekho bese kuyaphelela kanjalo. Baningi kabi abantu ababoshwayo beboshelwa izinto ezingekho kanti nami sengandize kuleso sibalo kodwa angeke ngize ngiluyeke lolu daba. Ngisho emphakathini manje sibukeka njengabantu abangalungile kanye neminden yethu.Sifuna ukuthi axolise nasemphakathini ukuze kuzophela naloku siloku sibukwa kabi.”
UNks Shezi onezinyaka eziyi-8 ekhulelwe uthe namanje usathuka uma eke ezwa imoto edlula ngesivinini noma emayo njengoba ehlala eduze komgwaqo.
“Ngahlukumezeka kakhulu namaphoyisa engishuka amadlebe ngibe ngikhulelwe ngaphatheka kabi ngaze ngagula ngabuya esibhedlela. Uma ngizwa imoto nje ebusuku ngivele ngishaywe uvalo kanti ingane yami eneminyaka eyi-8 kuyona kusanzima nokuthi ilale ebusuku isethuka namanje ngenxa yento eyayibona,” usho kanje.
Bonke laba bathe angeke baze bakuthole ukuphumula kuze kube kugezwa amagama abo.
Ikhansela laka ward-177 uMnu Thamsanqa Sithole uthe akukho okuningi azokusho kodwa unethemba lokuthi ngelinye ilanga ubulungiswa buyokwenzeka.“Uma ngabe kukhona umuntu onenkinga kuzomele ukuthi ayibhekise kumbuso ngoba iwona okade ubashushisa ayi mina.Anginayo ngisho imininingwane yalo leli cala kodwa ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga ubulungiswa buyokwenzeka.
“Ngiyawathemba amaphoyisa ukuthi azokwenza umsebenzi wawo ngoba into ebalulekile ubulungiswa nokuthula,” kubeka yena.